Helikopta ịlụ ọgụ megide ọkụ. Nke a bụ ihe na-aga n’ihu ụlọikwuu Sikorsky HH-Series 60F. Nke a add-on dị n'ọtụtụ ederede dị iche iche. helikopta siri ezigbo ike ijizi, anyị na-atụ anya nkwupụta n’aka gị! Egbula oge ịkọwa echiche gị. Nnwale dị mma na ezigbo ụgbọ elu, na-alụ ọgụ nke ọma megide ọkụ.
Emepụta site Sikorsky Aircraft Corporation ebe ọ bụ na 1974, S-70A na S-70B ebupụ bụ nsụgharị nke Uh-60 Black egbe na SH-60 Seahawk
Onye edemede: Moore et Kirk Sunley
Sikorsky Kra-124 Sea King HAR3A FS2004